HAL.DLL TSY HITA NA SIMBA: AHOANA NO HAMAHA - DLL - 2019
Fomba hanamboarana ny hadisoana amin'ny tranokala hal.dll
Koa satria ny Apple iPhone dia tsy mamela ny fampivelarana ny fahatsiarovana ao anatiny, maro ireo mpampiasa dia mila manadio tsikelikely ny fampahalalana tsy ilaina. Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny rehetra amin'ny finday dia maka ny toerana misy sary azo esorina amin'ny fitaovana, naverina teo amin'ny solosaina.
Mandefa sary avy amin'ny iPhone ho solosaina
Androany dia hifanakalozantsika fomba isan-karazany handefasana sary dizitaly avy amin'ny findainao mankany amin'ny solosainao. Ny vahaolana tsirairay atolotra dia tsotra ary mamela anao hiatrika haingana ny asa.
Fomba 1: Windows Explorer
Alefaso aloha ny fomba amam-pitaovana fampitana sary avy amin'ny finday mankany amin'ny solosaina. Misy fepetra manan-danja: iTunes dia tokony hapetraka ao amin'ny ordinatera (na dia tsy ilaina aza io tranga io), ary ny telefaona dia mifanaraka amin'ny ordinatera (noho izany, amin'ny finday smartphone, amin'ny fangatahana ny rafitra, mila miditra amin'ny codecode ianao).
Ampifanaraho amin'ny alalan'ny ordinatera ny findainao amin'ny solosainao. Miandrasa ny fifandraisana hitranga, ary manomboha Windows Explorer. Ny lisitry ny fitaovana mifandray dia hampiseho ny finday.
Mandehana any amin'ny fitehirizana ny sarin'ny fitaovana misy anao. Ny saripika sy ny horonan-tsary rehetra dia haseho eo amin'ny efijery, samy nalaina tamin'ny finday ary ny fitehirizana azy ireo fotsiny. Raha hamindra ny sary rehetra ao amin'ny solosaina dia tsindrio ny fikandrana klavier eo amin'ny klavier. Ctrl + Aary afindrano ireo sary ao amin'ny ordinatera tianao ao amin'ny ordinatera.
Raha tsy mila mandefa ny sary rehetra ianao, fa ireo mifidy ireo, dia atsangano ny fanalahidin'ny klavier Ctrlary tsindrio fotsiny ny sary tianao, asongadino amin'izy ireo. Avy eo dia arotsaka ary atsipy ao anaty ordinatera ao amin'ny ordinateranao.
Fomba 2: Dropbox
Mazava ho azy fa misy serivisy rahona iray azo ampiasaina hanondrana sary avy amin'ny iPhone ho solosaina, ary ny mifamadika amin'izany. Diniho ny zavatra hafa momba ny ohatra ny Dropbox.
Download Dropbox amin'ny iPhone
Mihazakazaha amin'ny telefaoninao. Ao amin'ny faritra afovoan'ny varavarankidina dia fidio ilay bokotra "Create"ary tsindrio avy eo "Lasa sary".
Rehefa aseho eo amin'ny efijery ny sehatra fitehirizam-pejy iphone, alao ny boaty ho an'ireo sary tianao ary dia fidio ilay bokotra eo amin'ny ankavanana ankavanana "Next".
Ampahafantaro ny takelaka toerana izay hodiavina ireo sary, ary atombohy avy eo ny synchronization amin'ny fipihana ny bokotra "Zavatra".
Andraso ny sary mba hanjavona ny rindrankajy sync. Hatramin'izao, ireo sary dia ao Dropbox.
Ny dingana manaraka dia ny manokatra ny folder Dropbox ao amin'ny solosainao. Raha vao voahangona ny angon-drakitra eto dia hampiakarina ireo sary rehetra.
Fomba 3: Documents 6
Ny karazana fampiharana tena ilaina tahaka ny fitantanana ny dossier dia mamela ny famahanana sy fanombohana karazana rakitra samihafa amin'ny iPhone, fa koa mba ahafahana miditra haingana amin'ny solosaina. Ny fomba tsara dia tsara raha samy mifandray amin'ny tambajotra Wi-Fi ny iPhone sy ny solosaina.
Vakio bebe kokoa: Mpitantana ny rakitra ho an'ny iPhone
Raha mbola tsy nametraka Documents 6 ao amin'ny smartphone ianao, alaina maimaim-poana ary apetraho ao amin'ny App Store izany.
Download ny dokam-barotra 6
Manentana Documents. Eo amin'ny faritra ambany ankavia dia sokafy ny tabilao "Documents"ary avy eo ny ordinatera "Photo".
Tsindrio ny ellipsis icon eo akaikin'ilay sary, ary mifidiana "Copy".
Misy varavarankely iray hafa miseho eo amin'ny efijery, izay ilainao hisafidy izay ordinatera Documents dia haka tahaka ny sary, ary avy eo mameno ny famindrana. Alefaso daholo ireo sary tianao halefa amin'ny solosainao.
Ankehitriny ny telefaona dia mila miditra amin'ny Wi-Fi. Mba hanaovana izany, tsindrio ny kisary eo amin'ny zoro ambony havia, ary sokafy avy eo ilay singa "Fiara Wi-Fi".
Apetraho eo anelanelany ilay izy "Enable" ho any amin'ny toerana mavitrika, ary avy eo araho amin'ny URL izay miseho - ho azy dia mila miditra amin'ny tranonkala rehetra ao amin'ny solosainao ianao.
Rehefa manaraka ny rohy ny solosaina, dia mila manome alalana amin'ny telefaonina ianao mba hifanakalozana vaovao.
Ao amin'ny ordinatera dia misy ny ordinatera izay napetrakay ny sarinay, ary avy eo ny sary azy.
Kitiho ny rakitra, hisokatra malalaka ny sary ary ho azo atao ny mamonjy (tsindrio havanana ary mifidiana "Vonjeo ny sary tahaka ny").
Fomba 4: iCloud Drive
Angamba ny fomba tsara indrindra handefasana sary avy amin'ny iPhone amin'ny ordinatera, satria amin'ity tranga ity, ny fanondranana ny sary ho any amin'ny rahona dia ho tanteraka tanteraka.
Voalohany aloha dia mila manamarina raha mavitrika amin'ny finday ny famoahana sary. Mba hanaovana izany, sokafy ny fanovana, ary araho amin'ny fisafidianana ao an-tampon'ny varavarankely ny ID IDanao.
Ao amin'ny sehatra misokatra eo amin'ny varavarankely vaovao "ICloud".
Hisafidy singa "Photo". Ao anatin'ilay varavarankely vaovao, ataovy azo antoka fa efa nampiditra zavatra ianao ICloud Media Librarytoy izany koa "Ny sariko".
Afaho ny installer ary apetraho iCloud ho an'ny Windows eo amin'ny solosainao.
Download iCloud ho an'i Windows
Sarintany iray hita ao amin'ny Windows Explorer "Photo ICloud". Ny tranokala dia novolavola tamin'ny sary vaovao, mila programa ny programa. Tsindrio eo amin'ny sarimihetsika miaraka amin'ny zana-tsipika hanokatra ny lisitr'ireo fampiharana mihazakazaka, tsindrio havanana amin'ny iCloud, ary mandehana "Sokafy ny iCloud Settings".
Hetezo ny takelaka iCloud Drive ary "Sary". Eo ankavanana amin'ny singa faharoa, tsindrio ny bokotra. "Masontsivana".
Ao amin'ny varavarankely vaovao, jereo ny fisafidianana eo akaikin'ireo zavatra ICloud Media Library ary "Ny sariko". Raha ilaina dia manova ny lahatahiry default amin'ny solosaina izay hotsipihan'ny sary ary tsindrio ny bokotra. "Hatao".
Manaova fiovana amin'ny programa amin'ny alàlan'ny klikanao eo amin'ilay bokotra eo ambany ankavanana "Ampiharo" ary fenoy ny varavarankely.
Fotoana fohy, ny ordinatera "iCloud Photo" dia hanomboka hameno sary. Ny fiantsoana haingana dia miankina amin'ny fifandraisanao amin'ny Internet ary, mazava ho azy, ny habeny sy ny isan'ny sary.
Fomba 5: iTools
Raha tsy afa-po amin'ny asan'ny iTunes ianao, ity programa ity dia hahita namana mahatalanjona, ohatra, iTools. Ity programa ity, izay tsy mitovy amin'ny rindrambain'i Apple, dia afaka mamindra ireo sary hita ao amin'ny fitaovana amin'ny ordinatera amin'ny kaonty roa.
Ampifanaraho amin'ny iPhone ny solosainao ary apetraho iTools. Ao amin'ny faritra havia eo amin'ny varavarankely dia mandehana mankany amin'ny tabilao "Photo".
Ao amin'ny faritra afovoan'ny varavarankely dia haseho ireo sary rehetra ao amin'ny iPhone. Raha handefa sary ianao dia atomboy ny sary tsirairay amin'ny alalan'ny tsindry iray. Raha te halefa amin'ny solosaina daholo ireo sary rehetra dia tsindrio ny bokotra amin'ny ampahany ambony amin'ny varavarankely. "Select All".
Tsindrio ny bokotra "Export"ary mifidiana "To folder".
Ny Windows Explorer dia hiseho eo amin'ny efijery, izay toerana ilainao hametra ny lahatahiry mankany amin'ny toerana izay hamonjena ireo sary voafantina.
Manantena izahay fa amin'ny fanampianareo dia afaka mahita ny fomba tsara indrindra handefasana sary avy amin'ny Apple iPhone na fitaovana iOS hafa amin'ny solosainao. Raha manana fanontaniana ianao, dia anontanio izy ireo amin'ny fanehoan-kevitra.